बन्दाबन्दीमा काठमाडौं बाहिरिनेको तथ्याङ्क खोइ ?
रिपोर्ट नुनुता राई
सरकारले बन्दाबन्दी घोषणा गरे पनि पहुँच भएकाहरु पास लिएर सवारी साधनबाटै आवतजावत गरिरहेका छन् भने मजदुर र विद्यार्थी हिँडेरै बाहिर गएका छन् । तर, कतिले उपत्यका छाडे भन्ने तथ्याङ्क कुनै निकायसँग छैन ।
विद्यार्थी भर्ना नगर्न र शुल्क नलिन विद्यालयहरूलाई शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन, विद्यालय सञ्चालक भन्छन्– राहत दिनुपर्छ
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तत्काल कुनै पनि तहमा विद्यार्थीको नयाँ भर्ना नगर्न विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
खाद्यान्न वितरण गर्दा विपन्नलाई चुल्हो बाल्नै मुश्किल, ललितपुर महानगरले पकाएर खुवाउन थाल्यो खाना
खाद्यान्न वितरण गर्दा विपन्न तथा दैनिक ज्यालादारी मजदुरहरूले ग्यास, तरकारी र मरमसलाको अभावमा खाना पकाएर खान समस्या भएको गुनासो गरेपछि पकाएरै खुवाउने निर्णय गरिएको उप–मेयर गीता सत्यालले बताइन्।
अनलाइन कक्षामा त्रिविकाे नियम: अनिवार्य हाजिर र औपचारिक पोशाक ! त्रिविले अनलाइन कक्षामा पनि अनिवार्य औपचारिक पोशाक र हाजिरीको व्यवस्था गरेपछि धेरै विद्यार्थी र शिक्षक नै आश्चर्यमा परेका छन् ।
त्रिविको अनलाइन कक्षाः इन्टरनेटको पहुँच नहुँदा विद्यार्थी अन्याेलमा अनलाइन माध्यमबाट सबै क्याम्पस, विभाग र स्कूलमा अनिवार्य पठनपाठन गराउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आचारसंहिता सहितको निर्देशिका जारी गरेपछि इन्टरनेट तथा प्रविधिको पहुँचमा नभएका विद्यार्थी अन्योलमा छन् ।
‘इरफानले बिरामी परेपछि आफ्नो नाममा पूजा गरिदिन भनेका थिए’ भारतको एनएसडीमा पढ्दा सुनील पोखरेल, इरफान खान, सुतपा सिकदर (इरफानकी श्रीमती) र सुमती मिल्ने साथी थिए। उनीहरूलाई ‘ग्याङ अफ फोर’ भनिन्थ्यो। सुनीलकी जीवनसाथी निशा शर्माको पनि इरफान र सुतपासँग घनिष्टता थियो। इरफानको निधनपछि पुराना दिनलाई सुनील र निशाले यसरी सम्झिएः
बन्दाबन्दीले ओइलायो फूल व्यवसायः दैनिक सवा करोड घाटा कोरोनाभाइरस महामारी नियन्त्रणका लागि एक महीनादेखि लगाइएको बन्दाबन्दीका कारण पुष्प व्यवसायीहरूको फूल बिक्री ठप्प भएको छ। बिक्री हुने मुख्य सिजनमै बजार चौपट हुँदा उनीहरुले लहलहाउँदा फूलहरु काटेर फाल्ने गरेका छन्।
क्‍वारेन्टिनमा जन्मिंदै नयाँ गीतहरू बन्दाबन्दीका कारण संगीतकर्मीहरुको नियमित सिर्जना कर्म यतिवेला बिथोलिएको छ। यो स्थितिमा संगीतप्रेमीहरुले नयाँ गीत सुन्न कहिले पाउलान् त ?
कति सम्भव छ बन्दाबन्दीमा अनलाइन कक्षा ? बन्दाबन्दी लम्बिंदै जाँदा शिक्षण संस्था खुल्ने अनिश्चितता बढेसँगै कतिपय विद्यालयहरूले इन्टरनेटको प्रयोग गरेर विद्यार्थीलाई पढाउन थालेका छन्।
सात प्रदेशका सात उपसभामुख: बन्दाबन्दीमा हुने घरेलु हिंसा विरुद्ध के गर्दैछन् ? महामारीको वेला महिला माथि हुने हिंसा न्यूनीकरणमा प्रदेश संसद् र उप–सभामुखको भूमिका कस्ताे छ ? के भन्छन् सात प्रदेशका उप–सभामुख ? हिमालकाे लागि नुनुता राईले गरेकाे कुराकानी–
उपत्यकाको बन्दाबन्दीः जोखिमबारे बुझेकाहरू नै रमिता हेर्न सडकमा अत्यावश्यक कामविना घरबाट निस्कन रोक लगाइए पनि भाइरस संक्रमणको जोखिमबारे बुझेकाहरूले नै नियम उल्लंघन गर्ने गरेका छन्। कतिसम्म भने, सजाय स्वरूप कोरोनाभाइरसबारे सचेतना कक्षा लिने प्रहरीलाई नै उनीहरूले महामारीबारे बुझाउँछन्।
नमुना परिक्षणलाई तीव्रता दिँदै प्रदेश १ सरकार द्रुत परीक्षण विधि (र्यापिड डाइग्नोष्टिक टेस्ट) बाट शुक्रबारसम्म जम्मा १ हजार ९२ जनाको नमूना परीक्षण भईसकेको छ । १ हजार ९० जनाको रिर्पोट नेगेटिभ आएको छ भने दुई जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको छ ।
खाद्यान्न चाहियो ? यी माध्यमबाट घरैमा मगाउनुस् (अनलाइन लिंक सहित) बन्दाबन्दीमा घरमा बसिरहेका उपभोक्तालाई लक्षित गरेर विभिन्न सुपरस्टोर र अनलाइन पसलले खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यक वस्तुको होम डेलिभरी सेवा दिइरहेका छन्।
बन्दाबन्दीमा रेष्टुरेन्टः कोही होम डेलिभरीमा, कोही खाद्यान्‍न बिक्रीमा बन्दाबन्दीपछि फेरिएको परिस्थितिलाई ध्यान दिंदै आम उपभोक्ताको माग अनुसार केही रेष्टुरेन्टले होम डेलिभरी सेवा दिन थालेका छन् भने कतिपयले उपभोग्य वस्तुको अनलाइन व्यापारमा हात हालेका छन्।
बन्दाबन्दीमा व्यस्तताले सिर्जनशील बनाएको छः निशा शर्मा विविधतायुक्त भूमिकामा अभिनय गर्नसक्ने सशक्त रंगकर्मी निशा शर्माले यो बन्दाबन्दीको समयलाई कसरी उपयोग गरिरहेकी छिन् ? हिमालखबरकी नुनुता राईले उनीसँग गरेको कुराकानीः
खेल नुनुता राई
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले लागू गरेको बन्दाबन्दी (लकडाउन) का कारण अहिले अरु क्षेत्र जस्तै खेलकुद गतिविधि पनि ठप्प छ। यो वेला विभागीय खेलाडीहरू कहाँ के गर्दैछन् त ?
चलचित्रमा कोरोना कहर: कर मिनाहा माग गर्दै चलचित्र निर्माता संघ
प्रदर्शनको तयारीमा रहेका नेपाली चलचित्रहरू बन्दाबन्दीको चपेटामा परेका छन् ।
बन्दाबन्दीमा खेलाडीः कोही फिल्म हेर्ने, कोही टिकटक बनाउने
नियमित रुपमा शारीरिक अभ्यास, प्रशिक्षण गर्नुपर्ने खेलाडी पनि यति वेला घरभित्रै छन्। कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणबाट बच्न शारीरिक दुरी कायम गर्नैपर्ने अवस्था छ। बन्दाबन्दीमा खेलाडीहरु के गरिरहेका छन्? हिमालखबरले केही खेलाडीसँग कुराकानी गरेको छ।
बन्दाबन्दीबाट चलचित्र प्राविधिकको बिचल्ली: विकास बोर्डले राहत नदिने, कलाकारहरूले सहयोग जुटाउँदै बन्दाबन्दीका कारण दैनिक गुजारा चलाउन समस्या भोगिरहेका चलचित्र प्राविधिकहरुलाई कलाकार, निर्माता, निर्देशक तथा वितरकहरुले खाद्यान्न सहयोग गर्न थालेका छन्। केही कलाकारले सहयोग रकम र खाद्यान्न दिएका छन् भने केहीले सहयोगको घोषणा गरेका छन्।
बन्दाबन्दीमा घरेलु हिंसाका उजुरी शून्य सामाजिक संजालमा बन्दाबन्दीले घरेलु हिंसा बढाएको चर्चा देखिए पनि प्रहरीको तथ्याङ्क ठीक उल्टो छ। घरेलु हिंसा नभएकै कारण उजुरी नपरेको प्रहरीको भनाइ छ।
बन्दाबन्दीमा कलाकारः अधिकांशको रोजाइ फिल्म र पुस्तक कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण फैलन नदिन सरकारले बन्दाबन्दी (लकडाउन) घोषणा गरेसँगै सर्वसाधरण घरबाहिर निस्केका छैनन्। अधिकांश समय घर बाहिर रहने कलाकार पनि यति वेला घरभित्रै छन्। उनीहरुको दिन कसरी बितेको छ? हिमालखबर ले केही कलाकारसँग उनीहरुको नयाँ दैनिकीबारे सोधेको छ।
खाली भए काठमाडौंका अधिकांश होस्टल नेपाल होस्टल एशाेसिएसनले ९ गतेबाट चैत मसान्तसम्म सबै होस्टल बन्द गर्न आह्वान गरेको थियो। उपत्यकाका करीब ९० प्रतिशत होस्टल बन्द भएको एशाेसिएसनका अध्यक्ष भक्ति पाठक बताउँछन्।
कोरोनाभाइरस संक्रमणको त्रास खेलाडीहरूमा पनि विश्वमा कोरोनाभाइरस संक्रमण फैलिएसँगै हरेक क्षेत्रमा असर परेको छ । नेपालमा हालसम्म कोरोनाभाइरस संक्रमित फेला नपरे पनि यसको असर चाैतर्फी परेको छ ।
कठैं ! मूल्यवान् सिक्का काँटीले छेड्ने, पगालेर गहना, औंठी बनाउने, धार्मिक तथा सांस्कृतिक पूजा लगायतमा आगोमा चढाइने गरेका कारण नयाँ र पुराना मूल्यवान् सिक्का नष्ट भइरहेका छन्।
किन बाँच्नुपर्छ मातृभाषा ? मातृभाषा संरक्षणमा बनेको नीति समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा थाहै नपाई थुप्रै भाषा लोप भइरहेका छन्।
विश्वविद्यालय परिसरमै यौन दुर्व्यवहार त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरमै छात्राहरूलाई सुरक्षा दिन असफल क्याम्पस प्रशासनले निगरानीको बहानामा सीसीटीभी राख्ने तयारी गरेको छ।
राहदानीमा सरकारको ‘व्यापार’ राहदानीको लागतभन्दा नौ गुणा बढी शुल्क असुल्दै आएको सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम तिरे छिटो सेवा दिने नियमबाट नाफाको व्यवसाय मात्र चलाइरहेको छैन, विभेद पनि गरिरहेको छ।
आत्मरक्षा तालिमले बढायो आत्मविश्वास सङ्गीता श्रेष्ठ मैतिदेवीस्थित एउटा घरको तेस्रो तलामा डेरा बसेर स्नातक तह तेस्रो वर्ष अध्ययनरत थिइन् । आत्मरक्षाको तालिम पनि लिंदै थिइन् । त्यही घरको दोस्रो तलामा बस्ने एक पुरुषले कहिलेकाहीं जिस्काउँथे ।
घर सजाउन लहरा लहराले घर सजाउने हो भने प्राकृतिक सुन्दरता मात्र होइन, प्रदूषणबाट समेत केही हदसम्म बच्न सकिन्छ।
सिक्का सिर्जना कुनै समय ५, १० र २५ पैसाका सिक्का दैनिक आवश्यकताका सामग्री किन्न अत्यधिक चल्तीमा थिए तर, अहिले ती सिक्का आफैं बिक्रीमा छन्।